सामान्यतया सहिद भनेपछि मुख्य गरी चार सहिदलाई नै सम्झने गर्दछन् सबैले । नेपालका चार सहिदप्रति सबैको समान सम्मान रहेको छ । शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई तत्कालीन राशा शासनले जसरी क्रुरतापूर्वक मारेको थियो, त्यसले तत्कालीन समाजमा राणा शासनप्रति विद्वेष फैलाएको थियो । त्यसपछिको धरपकड र यातनाले नेपाली समाजमा एकातिर डर र त्रासको त्यो भयावहता जमाएको थियो जसको कल्पना सितिमिति कोही गर्न चाहँदैन तर राजनैतिक स्वतन्त्रताका समर्थकहरुको विचारमा चाहिँ राणाशासनको जग हल्लिएको थियो । सहिद हुने, जेलमा यातनाले सहिद हुने, चरम यातना सहने, लुकेर भाग्ने, लुकेर बस्नुपर्ने, राजनीतिमा लाग्ने तथा राणाहरुको विरोधमा आवाज उठाउने जति सबैप्रति सम्मानको भाव थियो समाजमा ।
चार जनाभन्दा पहिले नेपालमा कायम व्यवस्थाविरुद्ध कोही लडेकै थिएनन् भन्ने होइन । कोही सहिद नै भएनन् भन्ने होइन । राजनीति गर्ने उदेश्यले नै स्थापित प्रजा परिषदले कुनै भूमिका नखेलेको होइन । भूमिका निष्प्रभावी पनि थिएन । कतिपयले कस्तो मान्यता राखेका छन् भने नेपालमा राणाशासन स्थापना हुँदैको बखतमा राणाहरुको विरोध गर्नेहरु थिए र उनीहरुलाई समाप्त पारिएको थियो । कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व तथा अन्य काण्डहरु यसका साक्षी हुन् । राणाशासन नै रक्तपातपूर्ण काण्डबाट सुरु भएको थियो । विरोधीहरुलाई सधैँ सिध्याउने काम राणाले गरेका थिए । कैयौँ दशकसम्म राणाहरुले नेपाललाई आफ्नो पारिवारिक राज्यको रुपमा कायम राख्न अनेक प्रयत्न गरेका थिए । परिवारिक राज्यको हरेक अंगलाई बलियो बनाइराख्न राणाहरुले दाम, साम, दण्ड र भेद सबै नीति अपनाएका थिए । केन्द्रमा जब राजनैतिक चेतना बढ्यो तब सहिद भएकाहरुको बारेमा धेरैले जान्ने मौका पाए । औपचारिक राजनैतिक आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा पहिले नै विभिन्न जिल्ला, सहर तथा गाउँमा कैयौँले राणा शासन र राणा परिवारको कार्यशैलीको विरोध गरेर ज्यान गुमाइसकेका थिए । तिनीहरुको लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।
राणाविरोधी आन्दोलन काठमान्डु केन्द्रित मात्र थिएन । राणाको विरोध देशभर भएको थियो । राणा शासनको विरोध गरेर सजाय पाउनेहरु अद्यपर्यन्त जीवित रहनेहरु पनि छन् । राजनीति नगर्ने तर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न चाहनेहरुलाई निरंकुश शासनले आँखाको कसिंगर बनाएको थियो । राणा शासनबाट अत्याचारमा पारिएर मारिएका जति सबै सहिद हुन् । राणा शासनको अत्याचार सहेर बाँचेकाहरुलाई पनि जीवित सहिद मानिनु पर्छ । तर सामान्यतया राणा शासनको समयमा राजनैतिक आन्दोलनमा लागेर सहिद हुनेलाई सहिद मानिने परम्परा रहेको छ भने पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा पञ्चायतविरुद्ध राजनैतिक लडाइँ लड्ने र मारिनेहरु पनि सहिद कहलिए । राणा शासनविरुद्ध आन्दोलन गरेर मारिनेहरुको संख्या ठूलो हुनुपर्छ । पञ्चायती व्यवस्था सुरुआत हुँदा देशमा राजनैतिक चेतनाको विस्तार भइसकेको थियो । राजनैतिक चेतनासँगै देशको विभिन्न भागमा विद्यालयहरु पनि खुलेका थिए । विभिन्न देशसँगको सम्पर्क पनि बढेको थियो । राणाशासन ढलेपछि र पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआत नभएको बीचको करिब डेढ दशकमा नेपाली जनताले राजनैतिक स्वतन्त्रताका साथै सामाजिक परिवर्तनको स्वाद लिइसकेका थिए । राजनैतिक चेतना तथा सामाजिक परिवर्तनले गर्दा सहिदको खेती केही बढी भएको हुनुपर्छ ।
राजनैतिक चेतनाको दृष्टिले मधेस सधैँ उर्वर ठाउँ हो । यहाँको मलिलो माटोमा अनेक किसिमका खेती फस्टाउने गरेजस्तै यहाँको माटोमा अनेक वैचारिक राजनैतिक खेतीले पनि फस्टाउने मौका पाएको हो । हो, समर्थन र विरोध दुवै सजिलै हुने राजनैतिक माटो मधेसकै हो । यस कारण राणाशासनको सुरुआत हुनुभन्दा पनि निकै पहिले यदि पृथ्वीनारायण साहको नेपाल एकीकरणको अभियानलाई नै नमान्ने यहाँको राजनैतिक चेतनाले मकवानपुरलाई जितेपछि यहाँको समस्यालाई कुटनैतिक माध्यमले समाधान गरेकोबाट देखिन्छ । नेपालमा राणा शासनको आरम्भ हुनुभन्दा केही दशक पहिले रौतहटको समनपुरमा नेपाल र अंग्रेजबीच युद्ध भएको थियो जसमा स्थानीयबासीले अंग्रेजलाई हराएका थिए । अंग्रेजसित आधुनिक बन्दुक र तोपसमेत थियो तर स्थानीयले स्थानीय प्रविधि प्रयोग गरेका थिए । नेपाललाई जोगाउन अंग्रेजसितको लडाइँमा अन्य विभिन्न ठाउँमा मधेसीले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो । पर्सा जिल्लामा पनि नेपाल र अंग्रेजबीच लडाइँ भएको थियो र अंग्रेजी पक्षलाई हराइएको थियो । यी र यस प्रकार देश नै बचाउने युद्धहरुमा मारिने सम्पूर्ण नेपाली र सम्पूर्ण मधेसीलाई आजको दिनको विशेष सलाम छ ।
राणाविरुद्धको आन्दोलन, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन र माओवादी जनयुद्धसमेतको समयमा गरी हजारौँ मधेसीले ज्यान गुमाएका छन् । राणा शासन व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने, पञ्चायतलाई मन नपराउने र माओवादी जनयुद्धमा लागेर देशलाई नयाँ व्यवस्था दिन खोज्नेमात्र होइन विशेष गरेर मधेस र मधेसीको पहिचानको लागि भएको लडाइँमा समेत मधेसीहरुले ठूलो सहभागिता जनाएका थिए । यथार्थमा हरेक राजनैतिक आन्दोलनमा मधेस र मधेसीको सहभागिताबिना सफल भएको छैन । काठमान्डुको सडकमा पनि आन्दोलनकारीको भीड देखाउनलाई मधेसबाट हजारौँ मानिस पुग्ने गरेको इतिहास छ, त्यसरी नै मधेस आफैँमा आन्दोलनको उर्वरभूमि पनि हो । राणाशासनको विरोधमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा २००७ सालमा चलिरहेको सशस्त्र राजनैतिक आन्दोलनको क्रममा मंसिर ३ गतेका दिन रौतहटको सदरमुकाम गौरमा सयौँजनाले ज्यान गुमाएका थिए । ती सहिदहरुको सम्झनामा हरेक मंसिर ३ गते गौरको सहिद स्मारकमा आजसम्म पनि सहादत दिवस मनाइन्छ ।
मधेसमा पनि सहिद दिवस मनाइने पुरानै प्रचलन छ । प्रचलनमात्र पुरानो होइन कि तरिका पनि पुरानै छ । सहिदप्रति सम्मान दर्शाइने र यसका समाजका हरेक पक्ष तथा वर्ग र समुदाय सम्मिलित हुन पाउने गरी सहिद दिवस मनाइनु पर्दछ । सहिदप्रति हरेक समाजले गर्व गर्न सक्नु पर्दछ र हरेकले आफूले यसरी सहिदलाई सम्झेको छु भन्ने कुरो आत्मैदेखि बोध गर्नु जरुरी छ । सहिद दिवस पनि फेसबुक र सञ्चार माध्यममा बढी मनाइन थालेको देखिएकोछ जुन वास्तवमा अन्य दिवसको भन्दा विशेष हो । यसलाई विशेष आयोजना नगरी पनि विशेष बनाएर विशेष किसिमले मनाउन सक्नु पर्दछ । सहिदलाई सम्मान गरिनु पर्दछ ।
यदि हृदयदेखि नै सम्मान गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले मधेसमा वा देशमा कहिले कुन आन्दोलनमा को र कसरी सहिद भए भन्ने कुराको अध्ययन गर्नु जरुरी छ । उदाहरणको लागि २००७ मंसिर ३ मा राणा विरोधी आन्दोलनमा सहिद हुनेमा को को छन् ? जम्मा कतिजना छन् ? तिनीहरुको नाम र ठेगाना पनि कम्तीमा पत्ता लगाउनु पर्दछ । साथै सहिदका आफन्तजन को को हुन् ? तिनीहरुको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? सम्भव भएसम्म सहिदहरुप्रति सम्मान जनाउने गरी उनको जीवनी पनि प्रकाशित होओस् । अझ सम्भव हुन्छ भने कुनै देशलाई बचाउने र देशभित्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनैतिक आन्दोलनमा सहभागी भएर सहिद भएका सम्पूर्ण महान सहिदलाई समेटेर हरेक जिल्लाको छुटाछुटै जीवनी प्रकाशित गरियोस् ताकि एकातिर सहिदको सम्मान हुन्छ भने अर्कोतिर उनका कीर्तिको प्रसारबाट अरुलाई समेत प्रेरणा प्राप्त हुन्छ ।
अहिले राज्यको व्यवस्थाको रुवरुप बदलिएको छ । बदलिएको व्यवस्थामा तीन तहको सरकार छ । सहिदहरुकै कारण देशमा यो व्यवस्था आएको हो भन्ने कुरो हामीले बिर्सन हुन्न । सहिद परिवारलाई राज्य, प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ ? सहिदको सम्मान गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ ? सहिदका नाममा विद्यार्थी छात्रवृत्ति वा केही विद्यालय, औषधालय तथा अन्य सामाजिक संस्थाको नामकरण गरेर ती सहिदहरुको योगदानको चर्चा गर्न सकिन्छ कि ? हेनभने समय बित्दै जाँदा सम्बन्धित घरपरिवारले पनि आफ्नै परिवारका सहिदलाई बिर्सदैँ जाने हुन्छ । राज्यले यस प्रकारको नीति ल्याओस् कि कमसकेकम हरेक व्यक्तिले आफ्नो अभ्यन्तरमा कमसे कम आजको दिन अनिवार्य रुपमा सहिदप्रति सम्मान दर्शाउने भावना उमार्न सकोस् । हरेकले सहिदलाई सम्मान गरोस् तर सरकारहरुले भने अझ उच्च सम्मान गरून् ।